भूपेन्द्र खड्का - कान्तिपुर समाचार
भूपेन्द्र खड्काका लेखहरु :
“कुनै भय र वस्तु देखेर वा खराबीको आशाले मनमा उत्पन्न हुने भाव, भय, त्रास ।” नेपाली बृहत् शब्दकोशमा लेखिएको डरको अर्थ हो यो । के डर शब्दको अर्थ मात्रै यत्ति हो त ?
विराट् सांस्कृतिक सहचारी
देशद्रोहको अभियोगमा चार सपूतलाई सहिद बनाएको घटनामा खाटा बस्न पनि पाएको थिएन । राणातन्त्रको दुन्दुभि प्रवृत्तिले समय नै आतंकित थियो । शासनलाई जलाउनुपर्ने राँको र जहान–परिवारका पेटका राँकाहरू बाल्न हरेक नेपाली उद्यत थिए । लाहुरेका पयरहरू दिन–रात लगाएर विदेशतिर कुदिरहेका हुन्थे । त्यस्तै कठोर समयको फेरोमा लाहुरे बाउको काँध चढी गोरखपुरको रेल–यात्रा गर्ने बालक हुन्– चेतन कार्की ५ वर्षका थिए उनी, भारतीय सेनाका कप्तान बुबाले देहरादून लैजाँदा । उतैको गोर्खा मिलिटरी स्कुलमा शिक्षा–दीक्षा भयो । कक्षा ९ सम्म ऐच्छिक संस्कृत पढ्ने उनी एक्लो विद्यार्थी भएपछि विज्ञान विषय लिए र मेट्रिकपछि पनि विज्ञान नै पढे । बीएस्सी पास गरे ।
कल्पनाको गगन, मुस्कुराउने कम्युनिस्ट बन न !
उसको नाम सेते हो, उसकी आमाले बोलाउने । उसको नाम कान्छा हो, उसका बाले बोलाउने । उसको नाम गोरे हो, उसका काकाले बोलाउने । उसको नाम गोकर्ने हो, उसका सहपाठीले बोलाउने । उसको नाम राजेन्द्र हो, हाजिरी मास्टरले बोलाउने । उसको नाम गगन हो, उसका सहयोद्धाहरूले बोलाउने ।
भक्तराज आचार्यसँग अन्तर्वार्ता : यहाँ ‘अ–सुर’ हरूको राज छ !
३० वर्षदेखि ललितपुर महालक्ष्मीस्थानस्थित घरभित्र एकोहोरो जीवन बिताउन बाध्य छन्, भजनशिरोमणि भक्तराज आचार्य । २०४६ साल मंसिर १९ गतेको एउटा दुर्घटनापछि उनको जीवनमा ठूलो बज्रपात पर्‍यो । हातले हार्मोनियमका रिडहरू फिट्न सके पनि स्वर र सुर हरायो । आफूले गाएका करिब ४ सयजति गीत, गजल, भजन, राष्ट्रिय गीत र बालगीतलाई साक्षी राखेर उनको जीवन बेसुर बन्यो । सुरमा पकड भएका विशेष गायक भनेर प्रशंसा पाइरहेको उर्वर समयमै क्यान्सरले उनको जिब्रो काटिनु नेपाली संगीतका निम्ति एउटा सुर हराउनुजस्तै हो ।
अबको किताब बजार
मोरङ, सुनसरीका तारानिधि रेग्मी (३७) काठमाडौं बसेर धापासीमा सुनवर्षी पुस्तक पसल चलाउँछन् र साहित्यिक पुस्तक प्रकाशन भएको २ वा ३ दिनभित्र देशभरिका करिब ९० वटा पुस्तक पसलमा डेलिभर गर्छन् ।
मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्‍या छ...
को–कति कट्टर पञ्च (अल्ट्रा रोयलिस्ट) को जुँगाको लडाइ चलिरहेका बेला कालीप्रसाद रिजालले यो गीत लेखेका थिए । उनी सूचना विभागका निर्देशक थिए । घन्टाघर जामे मस्जिदको छेउमा थियो, सूचना विभागको कार्यालय ।